Gacan ku dhiigle dilka geystay Dhuusamareeb. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Gacan ku dhiigle dilka geystay Dhuusamareeb.
Gacan ku dhiigle dilka geystay Dhuusamareeb.
Sida uu noo xaqiijiyay wariyaha warbaahinta Qaranka uga soo warama Dhuusamareeb Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, waxaa xalay magaalada Dhuusamareeb ka dhacday dil argagax leh kaddib markii nin ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Waaberi ee degmadaasi uu walaalkiis ku dilay guri ay wada deganaayeen.
Ciidamada ammaanka oo gaaray goobta uu dilku ka dhacay ayaa halkaasi kula ku arkay meydka dhibbanaha iyo gacan ku dhiiglihii oo goobtaasi ka baxsaday, waxeyna ciidamadu billaabeen iney dabagalaan ninka dilay walaalkiis si ay u soo qabtaan sharcigana u horkeenaan.
Si dhab ah looma oga sababta uu ka dhashay dilkan, sidoo kale ma jirto illaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Dhuusamareeb iyo hay’adaha amniga kaasoo ku saabsan falkan dilka ah.
Previous articleCiidamada XDS oo ka hortagay weerar ay maleeshiyaadka Shabaab ku soo qaadeen degmada Balcad.
Next articleCiidamadda amniga oo Fashiliyay Qaraxyo lagu aasay Boosaaso